Smartphone finday mora omena amin'ny Fetin'ny Reny | Androidsis
Finday finday mora vidy homena amin'ny Fetin'ny Reny
Ignatius Room | | Fitaovana Android
Fetin'ny Reny ny alahady ho avy izao, ary toy ny mahazatra, ny fanatanjahantena nasionaly handao ny fiantsenana mandritra ny minitra farany, dia azo inoana fa mbola tsy nividy fanomezana ho an'ny reninao ianao. Raha izany no izy, ary nieritreritra ianao nandritra ny fotoana kelikely fa tokony hanavao ny finday avo lenta finday ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay toro-hevitra vitsivitsy azonao atao mividy smartphone finday mora vidyho an'ny reninay.
Amin'ity lisitra ity dia asehonay anao ireo terminal mamela anay manarona ny filàna fototraNa ny terminal feno afaka maharitra antsika taona vitsivitsy aza tsy manahy ny amin'ny fanavaozana ny finday avo lenta isan-taona, na satria nanomboka niadana be izy, satria lany ny habaka, satria nijanona tsy niasa toy ny tamin'ny voalohany ...
3 Alcatel U5 HD
4 Xiaomi My A1
6 Samsung Galaxy J5 (2017)
7 Samsung Galaxy A5 (2017)
8 BQ Aquarius U2
Xiaomi dia mametraka antsika Redmi Note 5A, terminal misy a Efijery 5,5 santimetatra,mety ho an'ny be antitra izay te-hijery ny efijery tsy misy olana. Ao anatiny no ahitantsika ny processeur Qualcomm Snapdragon 425 miaraka 3 RAM, 32 GB fitehirizana anatiny ankoatran'ny SIM-roa.
Ao ambadiky ny fitaovana dia mahita fakan-tsary 13 mpx isika, raha ny eo anoloana kosa mahatratra 16 mppx. ny Redmi Note 5 bateria dia manome 3.080 mAh, mihoatra ny ampy ho an'ny renintsika, tsy miantso anay tsy tapaka milaza fa lany ny bateria finday avy hatrany.
Ny Xiaomi Redmi Note 5A dia misy ao Amazon ho an'ny 132,54 euro amin'ny mainty. Fa raha afaka kelikely dia afaka mividy azy amin'ny fotsy na volondavenona isika. Ho an'ny tsiro, loko.
Ny smartphone voalohany novokarin'i Google ary novolavolainy ny Pixel sy ny Pixel XL. Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra modely iray manana habe efijery ampy izahay mba tsy hilazan'ny reninay amintsika fa kely loatra ilay taratasy. Raha vonona handany 400 euro amin'ny smartphone iray izay haharitra taona vitsivitsy isika, ny Google Pixel XL dia safidy tena tsara.
Ao anatin'ny Google Pixel XL no ahitantsika ny Processor Qualcomm Snapdragon 821, miaraka RAM 4 GB sy tahiry anatiny 32 GB. Ny efijery 5,5-inch dia manome antsika kalitao tena tsara ary iray amin'ireo tombony lehibe ananany dia io no iray amin'ireo terminal voalohany havaozina amin'ireo kinova Android vaovao, satria io no terminal novokarin'i Google.
Ny Google Pixel XL dia misy amin'ny fotsy sy amin'ny volafotsy miaraka amin'ny fitehirizana 32GB isaky ny 399 euros. Ilay maodely 128 GB, tafakatra 479 euro. Miankina amin'ny fampiasan'ny renintsika ny finday avo lenta izany rehetra izany.
Vidio ny Google Pixel XL
Manolotra antsika ny U5 HD, finday avo lenta 5-inch ny orinasa frantsay, 89 euro fotsiny, vidiny mihoatra ny toekarena raha toa ka ny fampiasana izay hataon-drenintsika no kendrena amin'ny fampiasana WhatsApp sy fakana sary indraindray. Ny Alcatel U5 HD, manolotra anay a Efijery 5-inch miaraka amin'ny vahaolana 1.280 x 720miaraka amin'ny RAM 2 GB sy fitehirizana 16 GB.
Ny fakantsary farany an'ity terminal ity dia manome antsika a Vahaolana 8 mpx, toy ny fakantsary eo aloha. Ity smartphone ity dia safidy tsara indrindra raha toa ka voafetra be ny fampiasana ny finday avo lenta saingy te hanana Internet hatrany am-pelatanany izy ireo, fakan-tsary Lila mahazatra ary WhatsApp hifandraisana.
Vidio ny Alcatel U5 HD
Iray amin'ireo terminal tsara indrindra misy ankehitrinyeny an-tsena dia ny Xiaomi Mi A1, finday avo lenta 5,5-inch, miaraka amin'ny RAM 4 GB sy fitehirizana anatiny 64 GB. Ny efijen'ity terminal ity dia manome antsika vahaolana feno HD izay tsy hanana olana amin'ny renintsika mahita ny atiny izay aseho eo amin'ny efijery.
Ny Xiaomi Mi A5 dia misy amin'ny loko mainty, fotsy ary volamena, manomboka amin'ny 179 euro(modely volamena). Ao anatiny no ahitantsika ny processeur Qualcomm Snapdragon 625, 7,3 mm ny hateviny, 165 grama ny lanjany ary fakan-tsary avo lenta misy zoom optika.
Ny kinova Lite an'ny Huawei P10 dia manome antsika 200 euro fotsinyFantsona iray tantanan'ny fikirakirana Huawei KIRIN 658, miaraka RAM 4 GB sy tahiry anatiny 32 GB ahafahantsika manitatra amin'ny fampiasana karatra microSD hatramin'ny 256 GB.
Ny fakan-tsary any aoriana dia 12 mpx raha ny eo aloha kosa mahatratra 8 mpx. Izy io dia manana puce NFC afaka mampiasa Google Pay, ny Ny efijery 5,2-inch dia manana vahaolana feno HDIPS karazana ary misy tahan'ny 16: 9. Tsy ho olana ny bateria satria manome antsika 3.000 mAh mahazaka izy.
Vidio ny Huawei P10 lite
Samsung dia tsy afaka nanatrika ny tolo-kevitray hanomezana finday avo lenta tsy lafo vidy ho an'ny renintsika, miaraka amin'ny Samsung Galaxy J5 2017 izay safidy tsara tokony hodinihina. Ny Galaxy J5 dia manome antsika a Efijery 5,2 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana HDary ny endrika 16: 9 karazana SuperAMOLED.
Ity maodely SIM roa ity dia manome fahatsiarovana RAM 2 GB sy habaka fitehirizana anatiny 16 GB azo ahitam-bokatra hatramin'ny 256 GB mampiasa karatra micro SD. Izy io dia manana tompon'ny dian-tanana mba hiarovana ny fidirana amin'ny terminal ary ny faran'ny terminal dia Vita amin'ny metaly avo lenta izay manome famolavolana tena miavaka.
Misaotra ny fakan-tsary 13 mpx any aoriana sy ny fisian'ny f / 1,7, ny sary azontsika alaina maranitra be izy ireoary tsy mila hazavana firy izy ireo vao afaka mahazo valiny tena tsara. Afaka mahazo ny Galaxy J5 2017 amin'ny vidin'ny mainty 164,50 euro ihany isika. Raha mila ny loko volamena na fotsy isika dia tsy maintsy mandoa vola 7 sy 10 euro fanampiny isika.
Vidio ny Samsung Galaxy J5 (2017)
Raha toa ka mihoatra ny ampy ho an'ny renintsika ny haben'ny efijery 5,2-inch, ary ny Galaxy J5 dia somary fohy kely eo amin'ny lafiny fampisehoana dia manome antsika ny Galaxy A5 i terminal Efijery 5,2 santimetatra misy vahaolana feno HD, Fitehirizana anatiny 32 GB (azo velarina hatramin'ny 256 GB) ary RAM 3 GB.
Ny efijery SuperAMOLED 5,2-inch an'ny Galaxy A5 dia manome antsika a Fanapahana tanteraka ny HD, ny fakantsary aoriana sy anoloana dia 16 mpxary manolotra antsika vavahady f / 1,9, ahafahantsika mahazo valiny tena tsara amin'ny tontolo maivana. Izy io dia mahatohitra ny rano sy ny vovoka, mifanentana amin'ny famahanana haingana ary manana ny asan'ny AOD (Asehoy foana). Ny chip NFC tafiditra dia ahafahantsika mampiasa ny Samsung Pay sy Google Pay mba hanadino ny poketra ao an-trano.
Ny Samsung Galaxy A5 2017 dia mitentina 229 euroary hita amin'ny loko manga, volamena, mainty sy mavokely izy io, na dia mety miovaova aza ny vidiny arakaraka ny loko nofidintsika.
Vidio ny Samsung Galaxy A5 2017
Tsy afaka nanilika ny orinasa espaniola BQ tamin'ity fanasokajiana ity izahay. Ity orinasa ity dia manolotra antsika ny Aquarius U2, terminal iray manana sandam-bola mahafinaritra. Ao anatiny no ahitantsika ny Processor Qualcomm Snapdragon 435 avy ao Qualcomm miaraka amin'ny RAM 3 GB sy tahiry anatiny 32 GB, tahiry ahafahantsika manitatra amin'ny fampiasana karatra micrS hatramin'ny 256 GB.
Ny fakantsary aoriana amin'ity terminal ity dia mahatratra 13 mpx raha ny eo aloha dia 5 mpx, izay ahafahantsika mirakitra horonantsary amin'ny kalitao 1080. Ny vidin'ity terminal ity dia 165 euroamin'ny kinova SIM mainty sy roa.
Vidio ny BQ Aquaris U2
LG dia manolotra antsika ny Q6, terminal misy efijery 5,5-inch, tantanan'ny Processeur Qualcomm Snapdragon 435 ary RAM 3 GB. Ao anatiny dia ahitantsika 32 GB fitehirizana anatiny, toerana ahafahantsika manitatra hatramin'ny 256 GB amin'ny fampiasana karatra fahatsiarovana microSD.
Mikasika ny fiarovana, ny LG Q & mamela antsika hamaha ny terminal amin'ny tarehy na amin'ny alàlan'ny fakan-tsarimihetsika izay misy eo ambadiky ny fitaovana. Ny endrik'ilay efijery 18: 9, mamela antsika hampiasa telefaona amin'ny tanana iray, zavatra izay tsy isalasalana fa hankasitraka ny renintsika, raha tsy mila finday avo lenta izy nefa te-ho afaka hihazona azy sy hiasa amin'ny tanany iray.
Ny LG Q6 dia misy amin'ny 160 euro amin'ny Loko platinum, na dia azontsika atao amin'ny volamena sy mainty koa isika amin'ny vidiny 26 euro kokoa. Ny zava-drehetra dia miankina amin'ny safidin'ny renintsika masina.
Vidio ny LG Q6
Ilay goavambe japoney Sony, na dia efa elaela aza, toa misy ny fisiany eo amin'ny tontolon'ny telefaona voaheloka veryTsy azonay natao ny nanolo-kevitra ny Xperia L1, terminal iray misy efijery 5,5-inch, miaraka amin'ny RAM 2 GB sy fitehirizana anatiny 16 GB.
Ny fakan-tsary any aoriana amin'ity maodely ity dia mahatratra 13 mpx ary misy f / 2,2 hidiny, raha 5 mpx kosa ny eo aloha. Ny habaka fitehirizana anatiny dia azo hitarina hatramin'ny 256 GB amin'ny fampiasana karatra microSD. Ny Sony Xperia L1 dia sarany 149 euroary hita amin'ny loko mainty sy fotsy izy amin'ny vidiny mitovy.
Vidio Sony Xperia L1
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday finday mora vidy homena amin'ny Fetin'ny Reny